Imibuzo ebuzwa njalo (i-FAQ) - World Tourism Portal
Kuyini World Tourism Portal?
World Tourism Portal iyisitolo esisodwa sokuthenga amathikithi endiza, amahhotela, ukuqashwa kwezimoto nokuqashwa kwe-scooter, ukuhamba ngezinyawo, amathikithi omnyuziyamu, amathikithi amakhonsathi, isitimela namathikithi ebhasi nokunye okuningi.
Injini yethu yokusesha ifaka bonke abahlinzeki abakhulu osuvele ubazi nabancane kakhulu ngakho uhlala uthola imali engcono kakhulu futhi akudingeki uchithe isikhathi usesha futhi uqhathanisa namanye amasayithi. Ukubhuka uhambo lwakho lonke akukaze kube lula.
Kuyini World Tourism Portal ukwenza?
World Tourism PortalUmgomo kukusiza umhloli ukuba aqhubeke futhi. Kalula, ngokushesha futhi kuphephile.
Yingakho sihlala sizama ukuthuthukisa izinsizakalo zethu futhi sithuthukise ezintsha ukuze ukwazi ukucwaninga ngendawo futhi ubhukhe iphakheji ephelele yohambo lwakho ngaphandle kokubheka imininingwane noma insizakalo kunoma amanye amasayithi.
Is World Tourism Portal kuphephile?
Yebo, World Tourism Portal ibhizinisi elisemthethweni lokuhamba elizinze eCyprus elisebenza emhlabeni jikelele.
Akukho ukuthengiselana ngokwezezimali okwenzeka kuwebhusayithi lapho uthenga ukubhuka kwanoma yiluphi uhlobo.
Le webhusayithi ngokuyinjini enkulu yokusesha ifaka phakathi bonke abahlinzeki abakhulu nabaningi abancane kuyo yonke insizakalo yokuhamba etholakala emhlabeni wonke ngakho-ke igcina isikhathi nemali lapho kufanele ibheke amanye amawebhusayithi amaningi. Futhi, imihlahlandlela yokuhamba yamazwe amaningi namadolobha inikezela ngolwazi olungafani noluningiliziwe lwabavakashi.
Funda yethu Imigomo Nemibandela
Inkampani inenqubomgomo eqinile mayelana nedatha yomuntu siqu. Funda eyethu Inqubomgomo Policy futhi Isaziso sobumfihlo se-GDPR.